Disney no ao ambadiky ny fividianana Twitter | Androidsis
Ho liana amin'ny fividianana Twitter ihany koa i Disney
Nahazo vaovao isika ny herinandro lasa teo fa Google dia iray amin'ireo orinasa ao ambadiky ny fividianana Twitter amin'ny ho avy, izany tambajotran-tserasera misy hafatra bitika izany izay nohavaozina tato ho ato miaraka amina endrika vaovao maro. Izao dia rehefa tafiditra ao amin'ny filaharan'ny orinasa tsy mikorontana amin'ny fananana an'io tambajotra sosialy io i Disney.
Anisan'izy rehetra isika manana Salesforce, Google, Verizon ary Microsoft, izay no antony nanampiana an'i Disney. Matotra izy ny fahazoana lehibe indrindra ho an'ity orinasa manana an'i Lucasart ity eo ambanin'ny fehikibony, noho izany dia afaka mahita sarimihetsika Star Wars vaovao isika. Raha ny lojika, Twitter dia tambajotra sosialy tena mahaliana sy manintona ho an'ireo orinasa lehibe te-hanitatra ny repertoire nomerika na hahazo ny teknolojia.
Tsy koa ny nanomezana antsipiriany bebe kokoa momba an'ity fividianana ity, ka mamela antsika maniry kely hahalala bebe kokoa. Tsy hahagaga raha mahita ity orinasa goavambe ity mahazo Twitter, raha jerena izay nitranga tamin'ny karazana fividianana hafa toa an'i Pixar na i Lucasarts.
Ny antony mazava mahatonga an'i Disney hanana Twitter dia ny ifampidirana ireo tambajotra sy atiny isan-karazany mifandray. Ny atin'ny ESPN sy ny ABC dia ho hita ao amin'ity tambajotra sosialy ity, na dia misy aza ny safidy hampiasa azy io ho toy ny làlan'ny streaming mivantana. Tsarovy koa fa manana an'i Periscope ao amin'ny Twitter ny Twitter, ka izany dia nividy be.
Ireo mpifaninana hafa dia misy ny Salesforce, izay hifandray amin'ny Bank of America handefa ny filan'izy ireo, fa ny ambiny kosa manana ny heviny momba ny fomba hanolorana Twitter amin'ny tànany sasany. Google, tamin'ny voalohany, dia toa toerana tsara haleha, indrindra noho ny fifandraisana misy amin'izy ireo sy ny an'ny Mountain View hanana periskopa izy ireo ao amin'ny properties.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ho liana amin'ny fividianana Twitter ihany koa i Disney
[APK] Pelisdroid S2 tanteraka, mampianatra anao izahay ny fomba fampidinana, fametrahana ary fampianarana momba ny fampiasana ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android hijerena sarimihetsika maimaim-poana
Ity no sary voalohany an'ny Chromecast Ultra